トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada si ay u doortaan awoodda sare qowladda pachinko isticmaalka a
Qof walba waa, inay marjic u dooran a dukaamada pachinko, jawiga iyo adeegga heshay iyo dukaamada, iwm, waxaan u malaynayaa in ay jiraan noocyo kala duwan oo ah in, laakiin xaaladda qalliinka haddii aad rabto in aad tari dheelitirka uu noqon doono hal dhibic ka mid ah dukaamada waa weyn si ay u doortaan.
xaaladda ka hawlgala waa sida wanaagsan qowladda pachinko ah, waxaa sidoo kale waa firfircoon ah, waa wixii loo ogolaan lahaa in ay dareemaan tahay soo baxay. Marka shaki Xaggee baad ka dhacay waa, Waxaan u malaynayaa in dad badan oo geli lahaa dukaamada wanaagsan oo xaaladda hawl. Xataa marka dhinacya kala duwan u arkaan, laakiin waxaan idinku leeyahay qowladda in pachinko in wadar ahaan ganacsiga gaarka ah ayaa si guul leh, in, iyo qowladda pachinko wanaagsan oo ka mid ah faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka qalliinka, waxaan eegi doonaa waxa dhibic ka mid ah. hawlgalka
waa xaqiiqda ah in wax wanaagsan, baahida macaamiisha kasta, waa qowladda pachinko in uu rumoobay. Martigelinta iyo adeegyada wax, dabcan, qeyb ka mid ah heshay ka mid noqon doonaa barta weyn. In qaliinka waa qowladda pachinko wanaagsan, waa mid karaa ilaa xad, celcelis ahaan, heshay dalab. Oo weliba waxaannu ku badan yihiin si macquul ah ku guuleysan karto iibka, waxa kale oo aad ka filan karto si joogto ah u heshay a.
dabcan, mar mar ayaa sidoo kale taariikhda ururinta cad waxaa, laakiin maalin kasta tuujin doonaa model ah, sababtoo ah waa turjumaad taas oo soo baxay in ay jidka u gaar ah, waxayna ku xiran tahay ujeedada, waa in ay u badan tahay inuu ku guuleysto kordhay.
Intaa waxaa dheer, noocyo kala duwan oo macaamiisha u iman doonaan inay soo booqdaan. Maxaa yeelay, xataa kuwa aan wax badan ka aqoon pachinko baa imanaysa in dukaanka, madal ay sidoo kale xoog ku guurto, haddii ujeedadu taagan halkan kasta waa, waxaa inta badan noqon kartaa miiska lacag la'aan ah. Iyo ilaa xad, i si jeestay, xaddiga maal yar yahay iyo waxa kale oo aad ka filan karaa in ay ka dhaansado hit a. Inta badan oo ka mid ah faa'iidooyinka socda a dukaan wanaagsan pachinko, aad halkaas.
Intaa waxaa dheer, tan iyo markii ay kala duwan ee dadka u yimid inuu soo booqdo, laga yaabaa inay macluumaad ururinta. dukaamo Good of orodkii, sidaas yihiin macaamiisha badan oo joogto ah, haddii aan si guul leh dadka sida isgaadhsiin, noocyo kala duwan oo macluumaad ah oo aan macquul ahayn u dhiman waa wax soo dhegta.
Si kastaba ha ahaatee, in Dhanka kale, waxaa jira dabcan sidoo kale khasaaraha.
稼 Xaqiiqada ah in shaqada waa wanaagsan yahay, oo saldhig wanaagsan in ay ugu dhakhsaha badan u furi hoos u heli fadhiistay doonaa. IWM lagu daydo oo caan ah si ay u taaganyihiin ugu dambeeyay, waxaa la isla markiiba lagu aasay doonaa isxigaan. Istaag tartanka ee la doortay uu noqonayaa daran, waxa sheegay in hawlgalka DeMerit waa qowladda pachinko wanaagsan. In si ay u fadhiistaan ??miiska loogu talagalay, laga bilaabo maalinta la soo dhaafay, iyo in ay madal baadhitaanka hordhaca ah, kaas oo ujeedadiisu tahay, waxaad u baahan doontaa inaad hore booqo subaxdii dambe.
Intaa waxaa dheer, iyadoo closeout hal waqti, marka aad miiska ka tago, waa in soo laabashada uu noqon doono qof ku fadhiyey la joogo, wuxuu noqon doonaa ku dhowaad aan macquul ahayn. Marka lacagta maalgelinta ayaa kor u kacay, halkaas oo aad ka quusan, go'aan ah in madal dhaqaaqin, waxaan idinku leeyahay, mid ka mid ah DeMerit noqon adag.
xaaladda ka hawlgala waa dukaamo wanaagsan, shaki kuma jiro, waa dukaan wanaagsan. Waxa uu leeyahay dukaanka in isku daraa jiidashada inay soo jiitaan dadka, laakiin xaqiiqada ah in khasaaro noocan oo kale ah ayaa sidoo kale, waxaan u iman ka hor iyo dagaal dadka sidoo kale beddelay xusuusan.